माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमाथि स्थानीयले किन गरे आक्रमण, हेर्नुहोस् १६ कारण ! — Imandarmedia.com
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमाथि स्थानीयले किन गरे आक्रमण, हेर्नुहोस् १६ कारण !
विवादित जलविद्युत अायोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमाथि स्थानीयले आक्रमण गरेका छन् । नेपालको पानी कब्जा गर्ने उद्देश्यले दुबै आयोजना भारतलाई सरकारले दिएको भन्दै स्थानीयबासी लामो समयदेखि आन्दोलनमा थिए ।
पानी र विजुली दुबै भारतले नै उपयोग गर्ने गरी आयोजना बन्न लागेका थिए । आयोजना राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै जलाधार क्षेत्रका नागरिक सडकदेखि कानूनी लडाइँमा छन् ।
त्यसैगरी स‌खुवासभा रहेको विवादित अरुण तेस्रो माथि पनि स्थानीयले आक्रमण गरेका छन् । दुबै आयोजनामाथि शनिबार राति स्थानीयले आक्रमण गरेपछि कर्मचारीको भागाभाग भएको छ । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी एसजेभीएनले निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ।